စွန့်စားမှုချစ်သူများအတွက်ခရီးသွားစာအုပ် ၁၀ ခု | ခရီးသွားသတင်း
Lola curiel | 15/04/2021 09:56 | ယေဘုယျ, အချိန်အား, ခရီးသွား
ခရီးသွားခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်ကြွယ်ဝစေသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်နေရန်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်များမရှိခြင်းကြောင့်စူးစမ်းလိုသောဆန္ဒကိုဖယ်ရှားပစ်ရသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိဝေးလံသောနေရာများအကြောင်းဖတ်ပြီးအခြားခရီးသွားများ၏အတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာပါ, bug ကိုသတ်ပြီးသင်၏နောက်လမ်းကြောင်းကိုစတင်စီစဉ်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဤအရပျ၌ငါ့အဘို့ဖြစ်ကြ၏နှင့်အတူစာရင်းချန်ထားပါ စွန့်စားမှုချစ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးခရီးသွားစာအုပ် ၁၀ စောင်ကိုမမေ့ပါနှင့်။
2 patagonia ၌တည်၏
3 အီတလီ Suite: ဗင်းနစ်၊ ထရီးစ်နှင့်စစ္စလီကျွန်းသို့ခရီးစဉ်
8 ငရဲသို့သွားရမည့်ခရီး (၅) - ငါနှင့်အတူစွန့်စားမှုများနှင့်အခြား
10 Los Andes မှစာသုံးစောင်
၁၂ နှစ်ကြာပြီးနောက်ဂျာနယ်လစ် Manuel Leguineche ကဤသို့ပြောပြသည် "အတိုဆုံးလမ်း" မိမိအ Adventures ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့တယ် Trans ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်လေ့လာရေးခရီး, ကျွန်းဆွယ်မှစတင်ခဲ့သည့် ၄ x ၄ အရ ၃၅၀၀၀ ကီလိုမီတာကျော်ခရီးကို၎င်း၏ဇာတ်ကောင်များကိုယူဆောင်လာသည့်ခရီးဖြစ်သည် အတွေ့အကြုံထက်ပိုမိုလိုချင်သောစိတ်ဖြင့်အိပ်မက်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သူ့ကိုယ်သူကြိုးပမ်းခဲ့သောယောက်ျားလေးတစ် ဦး ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်: "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့သွားရန်"
၂ နှစ်ကျော်ကြာသောထိုလေ့လာရေးခရီးသည်ဖြတ်သန်းသွားသည် အာဖရိက၊ အာရှ၊လမ်းကြောင်း ၂၉ နိုင်ငံကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နှင့်ကောင်းမွန်စွာပြောခဲ့သောစွန့်စားမှုကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ဖတ်ရမည့်စာအုပ်တစ်အုပ်
ခရီးသွားစာပေ၏ဂန္၎င်းသည်စာရေးသူ Bruce Chatwin ၏ငယ်ဘဝမှစတင်ခဲ့သောအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
သငျသညျကွမျးတမျးရှာနေလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့ရှာသောစာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံ အဖြစ်မှန်အမှတ်တရများနှင့်ပုံပြင်များနှင့်အတူရောနှော ။ သင်စမ်းကြည့်လျှင်သင် Chatwin ၏ခရီးနှင့်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည် သငျသညျ Patagonia ၏အနှစ်သာရကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမှော်အတတ်နှင့်အထူးခြားဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အီတလီ Suite: ဗင်းနစ်၊ ထရီးစ်နှင့်စစ္စလီကျွန်းသို့ခရီးစဉ်
Javier Reverte ၏စာပေထုတ်လုပ်မှုသည်ခရီးသွားခြင်းအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်သည် အိမ်မှမထွက်ဘဲအကောင်းဆုံးနေရာများကိုအိပ်မက်မက်ရန်အထူးအကြံပြုလိုသည်.
အီတလီ Suite - ဗင်းနစ်၊ ထရီးစ်နှင့်စစ္စလီကျွန်းသို့ခရီးစဉ်သည်စာပေစီစစ်ရေးတစ်ခုနီးပါး Reverte ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုအီတလီနိုင်ငံရဲ့အလှဆုံးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရှုခင်းများမှခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ထို့အပြင်ခရီးသွားမှတ်တမ်းသည်ထိုဒေသကိုပိုမိုနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်သတင်းများ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ရောနှောထားသည်။
ဘယ်သူမှ monotony ကိုချိုးဖောက်ဖို့မစဉ်းစားဘူး? အရှေ့တောင်အာရှရှိ Dawn မှစာရေးဆရာ Carmen Grau ကသူမအမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုရရှိရန်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းတက်ရန်နှင့်သူမ၏အလုပ်မှထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် သူမဟာဘာစီလိုနာမှာနေခဲ့တဲ့ဘ ၀ ကိုစွန့်ခွာပြီးကျောပိုးအိတ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားတယ်၊
ခုနစ်လကြာခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ် ထိုင်း၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြန်မာ၊ ဟောင်ကောင်၊ မလေးရှား၊။ သူ၏စာအုပ်တွင်သူသည်သူ၏စွန့်စားခန်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဘော်ဒါ၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရထားနှင့်ညများကိုတည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင်မျှဝေသည်။
ဂျူပီတာ၏အိပ်မက်များတွင်သတင်းစာဆရာ Ted Simon ကပြန်လည်ပြောပြသည် သူ၏အောင်ပွဲသည် Triumph ဆိုင်ကယ်စီးပေါ်တွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရှိမုန်သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှစတင်ခဲ့ပြီး ၄ နှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံပေါင်း ၄၅ နိုင်ငံသို့လှည့်လည်ခဲ့သည်။ ဒီစာအုပ်ကတိုက်ကြီး ၅ တိုက်ကိုဖြတ်သန်းတဲ့သူ့ခရီးလမ်းအကြောင်း။ သငျသညျကတ္တရာကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်, သင်ကလွဲချော်မနိုင်!
သင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုသောအခါပုံမှန်ခရီးသွားလမ်းညွှန်ကိုမမျှော်လင့်ပါနှင့်။ Tom Sayer ကိုဖန်တီးသူအဖြစ်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိုသူ Mark Twain သည် ၁၈၆၇ တွင် Alta California သတင်းစာတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်နယူးယောက်မှထွက်ခွာခဲ့သည် ခေတ်သစ်သမိုင်း၌ပထမ ဦး ဆုံးဖွဲ့စည်းခရီးသွားခရီးစဉ် နှင့် Twain သတင်းစာ၏တောင်းဆိုချက်ကိုအပေါ်ရာဇဝင်စီးရီးရေးသားဖို့ရောက်လာတယ်။
အပြစ်မဲ့ခရီးသွားများအတွက်လမ်းညွှန်အတွက်စုဆောင်း သူ့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှသန့်ရှင်းသောမြေသို့ယူဆောင်သွားနိုင်မည့်ထိုခရီးလမ်းသည် သူဖော်ပြခဲ့သောဖော်ပြချက်များအရသူသည်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်နှင့်အီဂျစ်၊ စာအုပ်၏အခြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်တစ်ခုမှာ Twain ၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ဖြစ်သည်။ အလွန်ဝိသေသဟာသရှိပါတယ် စာဖတ်ရတာကိုပျော်စရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။
Colin Thubron သည်ခရီးသွားစာပေ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာရေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်ကမ္ဘာကိုထက်ဝက်ကျော်ကျော်သွားပြီးအရမ်းကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ခရီးသွားတွေထဲကတစ်ယောက်။ သူ၏လက်ရာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးဘာသာစကားပေါင်း ၂၀ ကျော်ဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။ အမျိုးအစားတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ပထမဆုံးစာအုပ်များမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုအာရုံစိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သူ၏ခရီးသည်ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ က) ဟုတ်တယ်၊ သူ၏ခရီးသွားမှတ်တမ်းများအားလုံးသည်အာရှနှင့် Eurasia ကြားတွင်ရှိသည် နှင့်စစ်မှန် configure ကမ္ဘာ၏ကျယ်ပြန့်သောofရိယာ၏ဓာတ်မှန် ပchangesိပက္ခ၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများနှင့်သမိုင်းသည်အစဉ်အလာများ၊
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Thubron ကထုတ်ဝေသည် Shadow of Silk Road, စာအုပ်တစ်အုပ်။ သူသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးကုန်းလမ်းတစ်လျှောက်တွင်သူ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ခရီးကိုဝေမျှခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားပြီး ၈ လအတွင်းကီလိုမီတာ ၁၁၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်အာရှအလယ်ပိုင်းတောင်တန်းများသို့ရောက်ရန်အာရှဒေသများစွာသို့ခရီးထွက်ခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာစာရေးသူ၏အတွေ့အကြုံကပေးသောတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ သူသည်ယခင်ကထိုနိုင်ငံများစွာသို့ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အနောက်ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောလမ်းကြောင်း၏သမိုင်းကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ရုံသာမကနှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အပြောင်းအလဲများမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟူသောအမြင်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ရိယာ။
ငရဲသို့သွားရမည့်ခရီး (၅) - ငါနှင့်အတူစွန့်စားမှုများနှင့်အခြား
မာသဂျယ်လ်ဟွန်းသည်စစ်သတင်းထောက်၏ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်အမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်သည် ၂၀ ရာစုဥရောပတိုက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောပconflictsိပက္ခများကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်မှာ Dachau ချွေးတပ်စခန်း (Munich) တွင်ပထမဆုံးအစီရင်ခံတင်ပြသူဖြစ်ပြီးနော်မန်ဒီဆင်းသက်ခြင်းကိုပင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
Gellhorn သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ရပ်များကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသူ၏စွန့်စားခန်းများတွင်အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိသည် ငရဲသို့သွားရမည့်ခရီး (၅) - ငါနှင့်အတူစွန့်စားမှုများနှင့်အခြားထိုအခက်အခဲများအကြောင်းဆွေးနွေးသည် မိမိအအဆိုးဆုံးခရီးစဉ်၏အကောင်းဆုံး၏စုစည်း သူကမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးစရာမလိုဘဲကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံကိုပြောပြသည်။ ဤစာအုပ်တွင်ဒုတိယတရုတ် - ဂျပန်စစ်ပွဲတွင် Ernest Hemingway နှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ခြင်း၊ ဂျာမနီရေငုပ်သင်္ဘောများရှာဖွေခြင်း၊ ကာရစ်ဘီယံမှတစ်ဆင့်လေ့လာရေးခရီးစဉ်၊ အာဖရိကမှတစ်ဆင့်ယူအက်စ်ယူအက်စ်အက်စ်အက်စ်အက်စ်အက်ဖ်အားဖြတ်သန်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
En ရိုင်းလမ်းကြောင်းဆီသို့ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Jon Krakauer ကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည် ခရစ္စတိုဖာဂျွန်ဆင် McCandlessဗာဂျီးနီးယားမှလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Emory University (Atlanta) မှသမိုင်းနှင့်မနုropဗေဒဘွဲ့ရပြီးနောက် ၁၉၉၂ တွင်၊ သူ၏ငွေအားလုံးကိုအကုန်အကျခံ။ ခရီးသွားရန်ဆုံးဖြတ်သည် Alaska ၏နက်နဲသောပင်လယ်သို့။ သူကနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ခဲစက်ကိရိယာများနှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ လေးလအကြာတွင်မုဆိုးများသည်သူ၏အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စာအုပ်က McCandless ရဲ့ခရီးကိုပြန်ပြောပြရုံသာမက သူ၏အသက်တာနှင့်အကြောင်းပြချက်သို့ delves အဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုကလူငယ်တစ်ယောက်ကိုဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
Los Andes မှစာသုံးစောင်
ပီရူးအင်ဒီးစ်တောင်တန်းဒေသသည်သဘာဝနှင့်စွန့်စားမှုခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားပက်ထရစ် Leigh Fermor သည်အင်ဒီးစ်မှစာသုံးစောင်ဖြင့်ဤဒေသကိုဖြတ်သန်းသည်။ သူသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် Cuzco မြို့၌စတင်ခဲ့ပြီးထို မှနေ၍ Urubamba သို့စတင်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းငါးယောက်လည်းသူနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည် အုပ်စု၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်ဤပုံပြင်တွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ဇနီး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ရတနာ၊ လူမှုရေးမနုropဗေဒပညာရှင်၊ နော့ဂ်ျရှမ်ရှိုင်းယားမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်၊ စာအုပ်တွင်သူသည်အုပ်စု၏အတွေ့အကြုံများ၊ သူတို့အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မည်သို့ဖြည့်ဆည်းပေးသည်၊ သူတို့၏ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အမြင်နှင့်ခရီးသွားခြင်းအပေါ်သူတို့၏အရသာကမည်သို့ပေါင်းစည်းသည်ကိုပြန်ပြောပြသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ Andes Gut မှပေးစာသုံးခုပါ မြို့မှ Cuzco မှတိုင်းပြည်၏အဝေးဆုံးနေရာများသို့သွားသောအထင်ကြီးစရာကောင်းသောခရီးဖြစ်သည်။ ခရီးသည်ငါး ဦး မှာ Puno မှ Titicaca ရေကန်အနီးရှိ Juni သို့သွားခဲ့ပြီး Arequipa မှ Lima သို့ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဤစာအုပ်၏စာမျက်နှာများသည်သင့်အားထိုနေရာတစ်ခုစီသို့ပို့ဆောင်ပေးသည် စွန့်စားမှုချစ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးခရီးသွားစာအုပ် ၁၀ စောင်၏ဤစာရင်းကိုပိတ်ရန်ပိုကောင်းသောဇာတ်လမ်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » အချိန်အား » စွန့်စားမှုချစ်သူများအတွက်ထိပ်တန်းခရီးသွားစာအုပ် ၁၀ စောင်